Pultrusion Profiles Vagadziri & Vatengesi - China Pultrusion Profiles Fekitori
China Fekitori Yakagadziriswa FRP Fiberglass Grating yeKuvaka
Girazi faibha yakasimbiswa epurasitiki (FRP) grating uye girazi faibha yakasimbiswa epurasitiki, rudzi rwegirazi faibha yakasimbiswa zvinhu, isaturated polyester resin se matrix, kuburikidza neyakagadziriswa kugadzirisa uye kuva mhando yeplate zvinhu, ine yakawanda isina chinhu nzvimbo FRP kugutsa kunogona kuve inoshandiswa sechinhu chakarongeka, chinoshandiswa pasi peiyo ngura nharaunda, mugero wekuvhara, chikuva, chikepe chengarava, stair, catwalks, nezvimwe. Nekushora ngura uye murazvo unodzora, isingaite-magnetic insulation, ...
Kushanda 1). Mapurini, matanda emadziro mukuvaka kwesimbi 2) Dzakabatanidzwa kuita zvivakwa pachezvadzo semwenje usingaremi maturusi, mabhureki, nezvimwe 3). Makoramu, matanda nemaoko mune akareruka maindasitiri michina inogadzira Main Zvimiro zvechisikirwo uye zvisina-kutsvedza kutaridzika: Natural jecha rinogona kuwedzerwa kumusoro kwechimiro chechimiro uye chisinga tsvete mhedzisiro. Ngura uye kuchembera kuramba: Musiyano muzvivakwa zveresini zvinopa iyo FRP imwe ngura kuramba, uye zvinogona iwe ...
1. Hunhu Hwepamusoro Isu tinovimbisa kuti zvese zvigadzirwa zvinoiswa pasi pemiedzo yakawanda kusangana nezvinodiwa nevatengi zvisati zvaendeswa. 2. Yemakwikwi Mutengo Mutengo unosiyana zvichienderana nechigadzirwa chiratidziro uye huwandu hwezvinodiwa. 3.Professional Kambani yedu inonyanya kuzivikanwa chikamu chedu sainzi uye tekinoroji timu 4. Yakanakisa Service Kune ese ako anobvunza nezve isu kana zvigadzirwa zvedu, isu tinokupindura zvakadzama mukati meawa gumi nemaviri. 5.Kupakata & Dhizaini Zvigadzirwa zvinogona kurongedzwa uye sh ...
Pultrusion chiitiko chinoramba chichienderera uchishandisa fiber inosimbisa ine thermosetting resin matrices. Zvinhu zvakasarudzika-zvekusimbisa, senge fiberglass inofamba-famba, mameti, machira akarukwa kana jira rakasonwa, anodhonzwa kuburikidza nebhati rekugezesa umo zvinhu zvese zvakasunganidzwa nemushonga wemvura thermosetting resin. Chaizvoizvo ma resini anosanganisira polyesters, vinyl esters uye phenolics. Iyo nyoro-yekunze fiber inoumbwa kune inodiwa geometric chimiro uye inodhonzwa mune inopisa moto simbi kufa. Kamwe mukati mefa, iyo ...
Zvokuvakisa U Chiteshi Simbi Kubva Simbi Mbiri Fekitori
Channel simbi ndeyakareba chimiro simbi iyo ine muchinjikwa chikamu che groove chimiro. Chiteshi simbi ndeyekushandisa kwekuvaka uye mechiniki kushandisa kabhoni simbi simbi, iri yakaoma chikamu chikamu simbi, chikamu chechimiro chakavezwa. Chiteshi simbi inonyanya kushandiswa kuvaka chivakwa, keteni rusvingo mainjiniya, michina michina uye mota kugadzira, nezvimwewo Kupedzisa chigadzirwa chiteshi simbi dhirivhari neyakafararira kuumba uye kuomesa kana kupisa rinopisa nyika. Yedu Advantages 1. Yakakwira mhando ne reasona ...
Yakakwira Hunhu FRP Angle / Iyo Girazi Fibre Angle / Simbi Angle
Yepamusoro-simba girazi rakareruka girazi fiber yakasimbiswa epurasitiki beams.First, isu tinosarudza Chinese inozivikanwa mhando kuti ive nechokwadi cheiyo FRP.Sechipiri, girazi danda haringogone chete kumira static mitoro, asi zvakare ine simba mutoro dzvinyiriro. Ine simba mutoro bvunzo yatakurwa. kunze kweiyo FRP matanda anogadzirwa nekambani yedu.Ipapo iyo yekukombama deformation yakazosvika 1 cm, kumanikidzwa kwakashandiswa kune iyo FRP beam.Apply makumi mashanu paseti imwe, ramba uchingoshandisa nguva 3,000 pasina kukanganisa, uye pasa bvunzo se q ...